Waraaqo qurux badan oo loogu talagalay tattoos waaweyn iyo kuwa yaryar | Tattoo
Conseguir waraaqaha quruxsan for tattoos ma aha in ay adag tahay in waqtiyadan marka ku dhowaad qof walba uu leeyahay kombiyuutar si ay u raadiyaan macluumaad. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarro badan oo badan sidoo kale way adag tahay in mid la go'aamiyo.
Qodobkaan waxaan kugu diyaarinay laba ka mid ah noocyada ugu quruxda badan si aad wax uga soo qaadatid ta kuugu xigta tattoo waxay kuxirantahay hadday yihiin nashqado yar yar oo jilicsan ama ka weyn oo aad u xiiso badan.
1 Italic: iftiin iyo xarrago leh sida daruur oo kale
2 Xarafka Gothic: Dhaqan Cajiib ah
Italic: iftiin iyo xarrago leh sida daruur oo kale
Nasiib wanaag xuruuf xaraf iyo xarago badan dhib dambe umay ahayn sidii hore, hadda oo mashiinnada tattoo-ga ee cirbadaha fiican la ikhtiraacay kaas oo u oggolaanaya naqshadaha leh khadad aad u dhuuban.
Waxaa ka mid ah ilaha ugu caansan ee loo yaqaan 'tattoos' jilicsan oo caqli badan oo aan haysanno far, waa qaab u muuqda mid aad u qurux badan laakiin uma adkaysato waqtiga si fiican u socda, maxaa yeelay si dhib yar ayey ku baabi'i kartaa khafiifka xarriiqdiisa.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan faallooyinka? Waa maxay wuxuu u ekeysiin karaa xaraf gacmeedka, sidaas darteed saameynta ugu dambeysa waxay yeelan kartaa isku dheelitirnaanta farta kumbuyuutarka lagu qoro iyo shakhsiyadda qoraalka gacanta lagu qoray.
Xarafka Gothic: Dhaqan Cajiib ah
Waraaqaha qurxoon ee loogu talagalay tattoos-ka ma noqon karaan oo kaliya iftiin iyo qurux, laakiin waxaan ka heli karnaa naqshado badan oo muuqaal ah oo qurux badan maqaarkeenna. Tani waa kiiska warqadda gothic, oo ku habboon kuwa doonaya naqshad naqshad leh.
Font-kan, runti, wuxuu leeyahay taariikh badan, tan iyo markii la isticmaali jiray ilaa 1150-kii. Waa qoraal ay ku qoran yihiin xarfo qafiif ah iyo geesaha. Waxay ka soo guurtay ilo kale, Carolingian, markii qarnigii XNUMX-aad ay lagama maarmaan noqotay in la helo nooc kale oo far ah oo ka dheereeya qoritaanka iyo akhrinta si loogu sii wado soo saarista buugaagta, kuwaas oo si isa soo taraysa loo dalbanayay.
Ma haysaa wax tattoos ah oo ka soo jeeda ilahaas? Maxaad sida ugu fiican u jeceshahay, inay caqli badan yihiin ama ay muuqdaan? Noo soo sheeg faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Warqad qurux badan oo loogu talagalay tattoos waaweyn iyo yar yar
Sida loo sameeyo sawirada guryaha lagu sameeyo, maanta: istiikarada